कोरोना संक्रमणबाट आज एकै दिन २२५ जनाको मृत्यु, कुन जील्लामा कतिको मृत्यु ? – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : नेपालमा गत २४ घण्टामा थप ९,४८३ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयले थप २२५ जनाको कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले मृ,त्यु भएको मङ्गलवार पुष्टि गरेको छ। तीमध्ये ७९ जनाको विगत २४ घण्टामा निधन भएको हो भने अन्य मृ,त्यु नेपाली सेनाले विभिन्न मितिका शव व्यवस्थापन गरेको आधारमा थप गरिएका हुन्।
एकै दिन पुष्टि गरिएको र २४ घण्टाको अवधिमा मृ,त्यु भएका यी दुवै सङ्ख्या हालसम्मकै उच्च हो। पीसीआर विधि र एन्टिजन विधिबाट २१,३१६ जनाको परीक्षण गर्दा अहिले त्यति सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू फेला परेका हुन्।
चौबीस घण्टाको अवधिमा ५,२२५ जना सङ्क्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभरि ९७ हजारभन्दा बढी मानिसमा सक्रिय सङ्क्रमण छ। कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या चार लाख १३ हजार १११ पुगेको छ। तीमध्ये काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या सर्वाधिक भएको सरकारको तथ्याङ्कले देखाउँछ। काठमाडौंमा २,७८८ जना, ललितपुरमा ६०२ जना र भक्तपुरमा ५३७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो।
दुई सय भन्दा बढी सङ्क्रमण पुष्टि भएका जिल्लाहरूमा झापामा २६४, मोरङमा ३५०, कास्कीमा ३७०, दाङमा २६५, बाँकेमा ५०६, रुपन्देहीमा ७०९, सुर्खेतमा २६४ र कैलालीमा २९५ छ। नेपालमा कोरोनाभाइरसका कारण मृ,त्यु हुनेको सङ्ख्या चार हजार ८४ पुगेको छ।
निषेधाज्ञा १५ दिन थपियो
काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा जेठ १३ गतेसम्म थप गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ।
नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा आगामी दुई सातासम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए। “विवाह, व्रतबन्धजस्ता कार्यक्रमहरू होटल वा पार्टी प्यालेसमा समेत गर्न नपाइने गरी निर्णय गरेका छौँ,” पराजुलीले भने।
अत्यावश्यक सामाग्री खरिद गर्नका लागि बिहान दिइएको समय भने एक घण्टा बढाइएर १० बजेसम्म कायम गरिएको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक सेवा दिने बाहेकका सबै कार्यालयहरू बन्द गराउने निर्णय गरिएको उनले बताए।
कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा विवाह र व्रतबन्ध १० जनासम्म भेला भएर स्वास्थ्य सावधानीका साथ घर वा तोकिएको स्थानमा गर्न पाउने भनिएको छ।
पछिल्ला निर्णयहरू बिहीवारदेखि कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।
Prevकोरोनावाट जोगीने भन्दै यस्तो उट्पट्याङ हर्कत गर्नेलाई चिकित्सकले दिए यस्तो चेतावनी (भिडियो हेर्नुस्)
Nextअन्तिम पल्ट नेपाल लगिदिनुस् भनेर विन्ति विसाउँदै थिईन् तर ओमनमै प्रा ण त्या गिन शोभाले !
३५ करोडको राँगोः जसले दिनमा २ पटक नुहाएर साँझ ‘ह्वीस्की’ पिउँछ (भिडियाेसहित) हेर्नुहोस ;
वैदेशिक रोजगारमा पठाएर भनेजस्तो काम नपाएपछि एजेन्टको गो-ली हानेर ज्या-न लिए !